Home Wararka Xaaladda Guriceel oo kasii dartay & ciidan gudaha u galay Magaalada
Waxaa caawa aad u kacsan xaalada magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaana la soo warenayaa in ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ay gudaha u galeen qeybo ka tirsan degmada, sida saldhigga booliska, dugsiga tababarada ciidamada ee Harqaboobe oo ku yaalla duleedka Gurceel iyo goobo kale.
Waxaa lasoo bandhigay sawirrada iyo muuqaalo laga duubay saldhigga booliska Gurceel oo ku yaalla bartamaha magaalada, halkaas oo dad shacab ah ay hor tubanyihiin.
Ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyaha Galmudug ugu magacaaban magaalada Aanas Cabdi Macalin ayaa si nabad ah kula wareegay saldhigga magaalada, dugsiga Harqaboobe, kadib markii ay dib uga gurteen ciidamada taabacsan Ahlu-Sunna ee todobaadyadii u dambeeyey gacanta ku hayay Gurceel.
“Degmada Gurceel waxaa caawa ka socda qax iyo kala carar, waxaana laga saarayaa dadka waayeelka ah, gaadiidka ayaa is dhaafaya xiligaan oo saq dhexe ah, qof walbana waxa ay aaday jihada ay is leedahay waad ku bad baadi kartaa,” ayuu MOL u sheegay Weriye ku sugan Gurceel.
Xaalada waxaa sii adkeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo ka soo ruuqaansaday fariisimihii ay ka sameysteen duleedka Gurceel, dhankooda ciidamada Ahlu-Sunna ayaa qeybo ka tirsan magaalada ka wada dhaqdhaqaaqyo xoog leh, goobjoogayaal ku sugan Gurceel ayaa soo sheegaya in magaalada ay ku dhex roondeynayaan ciidamada Ahlu-Sunna.
Cabsida dagaal ee caawa ka taagan Gurceel, waxay ku soo aadeysaa iyadoo maanta ay is-rasaaseyn kooban duleedka waqooyi ee magaalada ku dhex-martay ciidamada Ahlu-Sunna iyo kuwo uu hoggaaminayo guddoomiyihii Gurceel ugu magacaawnaa Galmudug, oo haatan dibad joog ka ah magaalada.
Ciidamada dowladda ayaa caawa duleedka Gurceel ku soo bandhigay dhoola-tus, waxaana laga cabsi qabaa in saacadaha soo socda ay weeraraan Gurceel oo 1-dii bishaan October ay qabsatay Ahlu-Sunna, tan iyo maalinkii ay Ahlu-Sunna la wareegtay gacan ku heynta Gurceel, Galmudug waxay bilaawday guluf dagaal oo Gurceel ku wajahan.
Lama oga sababta ka dambeysa in ciidamada Ahlu-Sunna ay baneeyaan qeybo ka tirsan magaalada, sida saldhigga booliska oo haatan la soo werinayo inay gudaha u galeen ciidamo ka tirsan Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka, kuwaas oo guddoomiye Aanas uu hoggaaminayo.
Hoos ka eeg sawirrada ay caawa soo bandhigeen ciidamada dowladda ee ku sugan duleedka Gurceel.